မုန်တိုင်းပြီးတဲ့နောက် | м м ť ђ ĩ ŋ ķ є я ကိုသင်ကာ
မုန်တိုင်းပြီးတဲ့နောက်	Posted by mm thinker on May 7, 2008
Posted in: Experience, Perspective, Politics, Sharing.	Tagged: Experience, Nargis.	Leaveacomment
ကျွန်တော်ခြေချခဲ့ဘူးတဲ့၊ တစ်ချိန်က ကျွန်တော်တက်ရောက်ခဲ့ဘူးတဲ့ မြကျွန်းညိုညို ကွန်းခိုရာတက္ကသိုလ်နယ်မြေဆိုတာကို ကျွန်တော် လှမ်းမျှော်ကြည့်လိုက်မိပါတယ်။ တစ်ချိန်က နေဘယ်လောက်ပဲပူပူ လမ်းလျှောက်သွားရင် နေရောင်မထိတဲ့ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာ လမ်းဆိုတာကြီးဟာ တောနက်ကြီးဖြစ်နေတာ တွေရတယ်။ အရင်က ကျွန်တော်တို့ လျှောက်ခဲ့ဘူးတဲ့ လမ်းမကြီး တစ်ခုလုံး ဒီလိုဖြစ်သွား လိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော် ဘယ်တုန်းကမှ မတွေးထင်ထားခဲ့မိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ဒီအခြေအနေကြီးကို မြင်တွေ့ခွင့်ရလိုက်ရပါပြီ။ ဒီနေရာမှာတောင် ဒီလောက်ဆိုးတာ အခြား ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက်တွေဆို ဘယ်လိုနေမလဲဆိုတဲ့ အတွေးဟာ ကျွန်တော့်အတွေးတွေကို လွှမ်းမိုးလျက်၊ ကျွန်တော့်စိတ်ကလည်း အပြေးသွားချင်ခဲ့မိတယ်။ ဒါကြောင့် ပထမဆုံးကျွန်တော်တွေ့လိုက်ရတဲ့ အငှားယာဉ်တစ်စင်းကို တားဖို့ ကြိုးစားခဲ့တယ်။ သူကျွန်တော့်ကို လက်ခါပြပြီး ဆက်မောင်းသွားခဲ့တယ်။ မိနစ်အနည်းငယ်လောက် ကြာတဲ့အခါမှာတော့ ပဲခူးကလာတဲ့ ခရီးသည်တင်ကားလို့ထင်ရတဲ့ ကားတစ်စီးကို ကျွန်တော်တားလိုက်မိတယ်။ လိုက်လို့ရမလားပေါ့။ ကျွန်တော့် အိတ်ကပ်ထဲမှာပါလာတဲ့ ငွေကြေးအနည်းငယ်နဲ့ဆို ရန်ကုန်မြို့ကို ပတ်လို့ရမယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ထားခဲ့မိတာကိုး။
ရပ်ကွက်အတွင်းမှာရှိတဲ့ လုပ်သားပြည်သူတစ်ချို့ကတော့ သူတို့မှာ ရှိနေတဲ့ လွှ၊ ပုဆိန်နဲ့ ဓားတွေကို ဆွဲကိုင်ရင်း ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေ ပြန်ပွင့်သွားအောင် အားကြိုးမာန်တက် ခုတ်ဖြတ်ပေးကြလို့ ညနေ လေးနာရီလောက်မှာ ပြည်လမ်း ပြန်ပွင့်သွားခဲ့ပြီး ဆက်သွယ်ရေးတွေ နည်းနည်းပြန်ကောင်းသွားခဲ့တယ်။ ဒီအချိန်ထိတော့ အစိုးရဟာ ဘာသတင်းမှ မကြေညာ၊ ဘာမှလည်းမလုပ်ဘဲ အချိန်အတော်ကြာအောင် နေနေခဲ့တာပေါ့။ ရပ်ကွက်ရယကတွေနဲ့ ရပ်မိရပ်ဖတွေကတော့ မုန်းတိုင်းသင့်ရပ်ကွက်သူ ရပ်ကွက်သားတွေအတွက် လေဘေးစခန်းတွေဖွင့်ပေးတယ်။ ထမင်းထုပ်တွေ လိုက်အလှူခံတာတွေလုပ်ပေးခဲ့တယ်။ လတ်တလောမှာတော့ ကုန်ဈေးနှုန်းတွေက သိသိသာသာမတက်သေးတော့ အားလုံးဟာ ၀ယ်ယူစားသောက်နိုင်ပါသေးတယ်။ ဒီတစ်ရက်ပဲလို့ ကျွန်တော် ထင်ခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် ရက်ကြာလာလေ ကုန်ဈေးနှုန်းက ကြီးလာလေလောပါ။ နောက်နေ့တွေရောက်တဲ့အခါမှာတော့ လေဘေးဒုက္ခသည်တွေကို ရပ်ကွက်လူထုက ထမင်းထုပ်မလှူနိုင်တော့ဘဲ ကိုယ့်ဝမ်းရေးကိုကိုယ် မနည်းဖြေရှင်းနေကြရပါပြီ။ ဒီအခြေအနေမှာ နိုင်ငံတကာက အကူအညီတွေပေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေ နိုင်ငံခြားမီဒီယာတွေက ကြေညာပေးခဲ့တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေ ပျော်ရွှင်ရပေမယ့် ဒီလိုကူညီမယ့် အကူအညီတွေအတွက် အစိုးရက လက်မခံသေးဘူးဆိုတဲ့သတင်းကို ကြားရတဲ့အခါမှာတော့ အစိုးရကို အတော်လေးကို ရွံမုန်းမိပါတယ်။ ဒီလောက်ကောက်ညစ်စင်းလဲတဲ့ အစိုးရမျိုးရဲ့အောက်မှာ အသက်ဆက်ရှင်ဖို့တာ မလွယ်ကူတော့တဲ့ အခြား ကျွန်တော်တို့လို မုန်တိုင်းသင့် ပြည်သူတွေရဲ့ ဘ၀ကို ကျွန်တော်စာနာမိတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ကျွန်တော့်မှာ ကူညီနိုင်ဖို့ဆိုလို့ ကျွန်တော်တက်ထားတဲ့ စားရေးသားခြင်းပဲဖြစ်နေတယ်။ ကျွန်တော်တို့မဂ္ဂဇင်းပိတ်ထားရတယ်။ မီးပျက်နေတာဘယ်လောက်ကြမယ်ဆိုတာ မသိရဘူး။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ မနက်ဖြန်အတွက်တောင် ထမင်းစားဖို့က အနိုင်နိုင်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ အင်တာနက်မှာ ဘလော့ခ်အခုရေးနေတယ်။ တစ်နာရီကို ငါးရာ ကျွန်တော့်မှာ ပိုက်ဆံနည်းမျိုးစုံနဲ့ ရှာဖွေပြီး ကျွန်တော့်တိုင်းပြည်အတွက် လုပ်သင့်တဲ့ အလုပ်တစ်ခု လုပ်လိုက်ရတဲ့အတွက် ကျွန်တော့်မှာ ခံစားနေရတဲ့ ခံစားတစ်ချို့တော့ ပြေလျော့သွားခဲ့ရပေမယ့် ရင်ထဲမှာတော့ ပြည်သူတွေအတူ မျှဝေခံစားနေရတဲ့ ကျွန်တော့်ဒုက္ခဆင်းရဲတွေကတော့ ပြေလျော့သွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
← Agencies to Help Myanmar Victims	လှူဒါန်းရန် အဆက်အသွယ်များ (Update) →	0 comments on “မုန်တိုင်းပြီးတဲ့နောက်”
Ulmuka_ဇီးကွက် on May 7, 2008 at 5:16 am said:
Reply	Ko Pyae on May 15, 2008 at 7:46 am said:
Reply	သိကြားမင်း on May 18, 2008 at 12:31 pm said: